Semale Gids: Ho an'ny mpampiasa anao ao amin'ny E-Commerce Company
Amin'ny maha mpivarotra e-varotra azy, tokony hitazona tabo amin'ny fifaninanana ianao. Nahoana? Voalohany, manampy anao hahatakatra ny fivoaran'ny tsena izany. Faharoa, mahafantatra tsara ny zavatra ianao rehefa mamorona marketingfanentanana ary mazava ho azy fa manampy anao ny manavaka ny raharaham-barotra amin'ny orinasa mpifaninana.
Miaraka amin'izany, i Jason Adler, manam-pahaizana momba ny Semalt Digital Services, manome ny torohevitra momba ny fomba hanarahana ny toeran'ny fifaninanana.
Manomboka amin'ny SEO
Mandamina ekipa iray hanaraha-maso ny tetikady SEO izay ampiasain'ny mpifaninana aminao. Jereo Ny isan'ny rohy miverina aminy dia mbola mianatra izay vohikala mifandraika amin'izy ireo - fotos de cameras fotograficas profesionales. Raha vao azonao ity angon-drakitra ity, dia fenoy ny tranokala anaoIreo rivo-piainana dia mifandray ary mijery raha afaka mampita izany fifamoivoizana azy any amin'ny fivarinao ianao.
Raiso ity ohatra ity. Isaky ny mitady ny rohy ho an'ny mpanjifanay aho, izaho hamantatra ireo mpifanaraka amin'ny mpanjifa mampiasa ny Semalt Analyzer. Mampiasa ny 'Open Site Explorer' izy mba hanangonana ny tranonkala rehetra (mpifaninana) mifandray aminy. Rehefa avy nanangona ireo antontam-baovao tena ilaina ireo aho, dia nitady ny nangatahana rohy hafa sy ny zavatra rehetra ilaina hanatanterahana ny drafitra.
Ny media sosialy amin'ny fifaninanana
Tokony hijery ireo mpifaninana amin'ny media sosialy ianao mba hamantarana ny votoatiny tetik'ady fitantanana. Misy fampiharana mahagaga antsoina hoe FollowerWonk izay ahafahanao mamantatra hoe iza no manaraka azy ao amin'ny Twitter ary Ny fomba fijerin'ny pejy anao manokana. Mino izany sa tsia, FollowerWonk dia afaka milaza aminao hoe iza no manaraka anao, ny mpifaninana aminao ary ny anao na ireo izay manaraka anao roa. Raha mahita olona iray manaraka anao sy ny mpifaninana aminao ianao, dia misy ny fahafahanaHeveriny fa liana amin'ny tsenanareo izy ary olona izay mendrika ny mifandray.
Ny fampiharana amin'ny Internet, Buzzmo dia mamela anao hamantatra ny votoatim-pifandraisana (sary,horonan-tsary na blôgy) ao amin'ny pejin'ny haino aman-jery sosialin'ny mpifaninana aminao. Ampiasao ity angon-drakitra ity mba hampisaintsainana ny hevitra vaovao momba ny pejy manokana amin'ny media sosialy.
Diniho ny traikefan'ny mpampiasa
Mitenena hoe mpampiasa anao amin'ny alalan'ny tranonkalan'ny mpifaninana ianao mitsidika azy. Ampahafantaro ny singa iray ao amin'ny katalaogy, ampio amin'ny sarinao ary mandehana mijery. Mora ve izany? Efa ela ve? Andramo nymitovitovy amin'ny fangatahana / fangatahana ary hanamarina raha toa ka mihoatra ny tolotra omenao ny tranokala na tsia. Azonao atao koa ny manamarina izay Ny mpanjifa dia tokony hiresaka momba ny orinasa. Ny tranokala Trustpilot dia tokony hanampy anao hanao izany amim-pahamendrehana.
Ny fivarotana sy ny varotra
Tandremo ny fivarotana sy ny ezak'ireo mpifaninana aminao mba hanavahana ny anaofanao manokana. Ny fomba fijery voalohany dia mety hampiditra ny gazetibony mba hahazo ny tolotra farany sy ny promos farany. Fomba hafa koa dia mamorona lisitry ny Twitter manokana ho an'ny mpifaninana na Google Alerts mba ho ao anatin'ny famintinana ny vaovao rehetra. Izany dia miasa amin'ny fotoana tena izy.
Na dia azo atao aza ny fampitahana amin'ny ankapobeny, dia misy tranga sasany amin'izanyafaka atao ivelan'ny aterineto. Ohatra, raha asaina hanao fampisehoana na fivoriana ianao, dia mangataha olona mahaleotena manatrika ny hetsikamijery ny soso-kevitrao. Inona no tokony holazainy momba ny fifaninanana misy anao? Ampiasao ity vaovao ity sy ny fijerinao manokana mba hanatsarana azy.